DAAWO:Wararkii ugu dambeeyey ee G. Sanaag, Dhoobo oo meel adag istaagay & Madaxtooyada oo kursigiisii cid kale u wada
November 10, 2019 Farah Abdikadir Mohamed 2
GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno gobolka Sanaag ayaa sheegaya in kulamo iyo shirar gaar gaar ah ay ka dhaceen maanta degmada Xingalool ee gobolka Sanaag, kuwaas oo u dhaxeeyey waxgaradka, waxgaradka dhaqanka iyo gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland C/xakiin Dhoobo Daareed.
Kulamadani oo intooda badan diirada lagu saarayey xaaladihii ugu dambeeyey iyo mowqifka Beesha Warsangeli ay ka qaadan doonto kasii mid ahaanshaha Puntland.
Qurba joogta iyo waxgaradka Beesha Warsangeli ayaa isku raacsan in ay qabtaan shir weyne balaadhan oo ay ku cadaynayaan mowqifkooda mustaqbal, waxaana socda qab qabaada shirkaasi oo aan weli la shaacin goobta uu ka dhici doono.
Dadka indha indheeya arimaha siyaasada Puntland ayaa aamisan in kacdoon hor leh uu madaxtooyada kasoo wajihi karo gobolka Sanaag sidoo kale xiisad hor leh ay sababi karaan arimaha haatan ka socda gobolkaasi.
Gudoonkii hore ee Baarlamaanka C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa isna kusii adkaysanaya in uu yahay gudoomiyaha Baarlamaanka, waxaana dhinacyada kala duwan ee uu la kulmay kala hadlay arimo badan.
Siyaasiyiinta kasoo hor jeeda xukuumadda Denni iyo maamulka Somaliland ayaa mid walbaaba dhankiisa isna kawadaa olole iyo fariimp gacan haatin ah oo ay u dirayaan gudoomiyaha si uu uga mid noqdo.
HALKAN RIIX OO KA DAAWO MUUQAALKA
Wasiirka Wasaaradda Biyaha Somaliland Saleebaan Cali Koore oo maalintii shalay ahayd warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa dhankiisa sheegay in Somaliland ay soo dhowaynayso Dhoobo hadii uu la yimaado aragtidooda Somaliland ahaan ay aaminsan yihiin, waxaana sidoo kale sheegay in Beelaha kasoo jeeda gobolada Bari ay tacadi ku qabaan Puntland waa sida uu hadalka u dhigaye halka madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash oo ay kasoo wada jeedaan gobolka Sool uu isna faray in Hargeysa uu iska xaadiriyo inta uusan la kulmin weerar siyaasadeed sida uu sheegay.
Gudoomiye Dhoobo oo ka hadlay kulankii maanta ayaa sheegay in uu si gaar ah u matalayey goboladda Sanaag iyo Hayland oo uu kasoo jeedo isla markaasna awood ahaan la kala qaybsaday awoodii Puntland xiligii la aas aasayey balse haatan socdaan qorshayaal ay wadaan kooxo yar oo majara habaabin kuwada Puntland waa sida uu sheegaye.
Wuxuu soo hadal qaaday arrimihii ka dhacay Garowe, isagoona sheegay in lagu qaaday Baarlamaanka duulaan qorshaysan oo uu sheegay in ujeedada loogu soo qaaday ay ahayd in la waayo la xisaabtan lala sameeyo hay’addaha dowladda, waxaana ku dheeraaday midnimada Puntland iyo qaabka ugu haboon ee lagu bad baadin karo.
Mr. Dhoobo ayaa dhanka kale ku eedeeyey madaxtooyada in ay doonaysay in aan waxba lala xisaabtamin oo wax kasta oo dhaca hore looga gudbo taasna aysan ahayn wixii lagu heshiiyey, isagoona xusay in ujeedooyin gaar ah ay wadato madaxtooyada oo marar badana lagu dayey lacago iyo laaluush balse uu iska diiday halka dadka kasoo jeeda gobolka Sanaag ayuu ku dhiiri galiyey in ay yeesheen mowqif midaysan iyo go’aan u gaar ah.
Xiisadaha is badaystay ee ka jira gobolka Sanaag ayaa sii cakirmaya xili madaxtooyada Puntland ay wado qorshe ay ku doonayso in kursiga Baarlamaanka ay ku saarto xildhibaan C/rashiid Yuusuf Jibriil oo isna kasoo jeeda gobolka Sanaag hasa yeeshee madaxtooyada ay yeesheen mudooyinkii ugu dambeeyey is fahan xoogan.
Mr. Jibriil oo madaxweynihii hore ee Puntland u ahaa shakhsiga ugu dhow ayaa haatana garab ka haysta madaxweyne Denni, waxaana madaxtooyadu ay dadaal badan ku bixinaysaa xildhibaan C/rashiid Yuusuf Jibriil oo siyaasad ahaan aysan ku qanacsanayn xildhibaanada Baarlamaanku in ay ka gado bulshada Puntland iyo indhaha siyaasada Caalamka si uu xili walba u fududeeyo danaha siyaasadeed ee madaxtooyada kaga xidhma Baarlamaanka.
Meesha ay saldhigan doonto xaaladu weli lama saadaalin karo, waxaase sii xoogaysanaya xili walba duulaanka siyaasadeed ee dhinac walba uu ku wajahayo kan kale si uu u muquuriyo awoodiisa siyaasadeed.
Warya ina karo hooyada ti kudhashey was Labada qof aya is dhaley maxa ka rabdah waxa rabdah sidi reer lascanto inad gabdhoda fushid miya rabdah ina karo hooyada was kabax afara hoda hada kabixiweysid waxa isku argah ina karo kula ima mesha jogdi aya qarxina ina karo aabah kuwas ina karo ord Hada aqli lahani lahad afkada qamriga ka so urayo aya iska so dhaqi lahad iyo dabada haban kasta ka gaco ba cashani lahad anigo Ahmed mooye leydhaho waxa ushegayah ina karo hada mar dabe shegadoda ka maqlo dhoobo dani ina karo ogo inad mesha jogdin aya qarxinh siba hargeysa ina karo hada wa kusheygy dhoobo Dani Afar hoda kabax shaqada ma ah ok aabah kuwas farah kaqad ok
Warya ina karo hooyada ti kudhashey was Labada qof ayaga is dhaley maxa ka rabdah waxa rabdah sidi reer lascanto inad gabdhoda fushid miya rabdah ina karo hooyada was kabax afara hoda hada kabixiweysid waxa isku argah ina karo kula ima mesha jogdi aya qarxina ina karo aabah kuwas ina karo ord Hada aqli lahani lahad afkada qamriga ka so urayo aya iska so dhaqi lahad iyo dabada haban kasta ka gaco ba cashani lahad anigo Ahmed mooye leydhaho waxa ushegayah ina karo hada mar dabe shegadoda ka maqlo dhoobo dani ina karo ogo inad mesha jogdin aya qarxinh siba hargeysa ina karo hada wa kusheygy dhoobo Dani Afar hoda kabax shaqada ma ah ok aabah kuwas farah kaqad ok
DAAWO-Hanjabaad ka dhan ah Xasan Sh, Farmajo & damaca beesha caalamka & kordhinta mataaladda G Banaadir oo Garoowe laga dhawaaqay
General Mascuud & odayaasha beesha Cayr oo go’aan ka gaarey wareejinta hubka Ahlusuna iyo damaca Qoorqoor.